Youtubers Hupenyu hunowanikwa pane Steam yeMac | Ndinobva mac
Youtubers Hupenyu hunowanikwa pane Steam yeMac
Jesu Arjona Montalvo | | Mitambo
Youtubers Life inowanikwa mune yayo Yekutanga Access vhezheni, mune iyo vhidhiyo mutambo unosanganisa tycoon genres, uye hupenyu hupenyu iyo mauri uchafanirwa kuve iyo iyo chikuru vhidhiyo blogger. Iwe uchafanirwa kugadzirisa mavhidhiyo, kuwana vanyoreri vechiteshi chako uye uwane mukurumbira. Mutambo wakazara zvachose español, uye pane Steam zvinoda 14,99 €. Ongororo dzemutambo dzakanaka kwazvo.
Gadzira hunhu hwako uye uzvigadzirise nezviuru zvemubatanidzwa uye tanga kutepfenyura ako mavhidhiyo ekutanga kubva kuimba yevabereki vako kwawakakurira. Rekodha mitambo yemitambo, tenga zvinyoronyoro and of Chizvarwa chekupedzisira, uye zadzisa ako ezuva nezuva mabasa uye kusangana kuti uwedzere mukurumbira wako uchibata neyako Fans, yako ushamwari, iwe mhuri uye manejimendi yenguva iyo iyo mutambo unokupa iwe. Zvino mushure mekuenderera mberi nekuverenga tinokusiira a Mutambo wemutambo, kuti iwe uone kuti masimba emutambo ari kufamba sei.
Gadzira ako mavhidhiyo:
Unofanira ronga ako mavhidhiyo handina kumbobvira ndanyudza zvakadaro, uye shambadzira ako ewebhu. Mumutambo iwe unozodaro tenga mitambo yako yaunofarira onlinet, vagamuchire kumba uye tanga kurekodha zvikamu zvako zvemutambo. Simbisa mavhidhiyo ako sezvo iwe uchiva mukuru vhidhiyo blogger kuti ivepo.
ari zvinodikanwa zvishoma izvo zvaunoda kutamba ndizvo zvinotevera:
SW: OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Shumba, Shumba.
Processor: 2 GHz kana inokurumidza processor
Memory: 2 GB ye RAM.
Graphics: 512MB Vhidhiyo Ndangariro.
Kuchengetedza: 3GB yenzvimbo inowanikwa.
Unogona kutenga mutambo 'Youtubers Hupenyu' pane chiutsi nekudzvanya pane zvinotevera link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mitambo » Youtubers Hupenyu hunowanikwa pane Steam yeMac
Jose Manuel Sánchez (@jmgor) akadaro
Ndakaitengera mac uye font haigone kuverengwa ivo vanobuda zvikwere ...
Pindura kuna José Manuel Sánchez (@jmgor)
Mashandisiro aungaita yako iPhone kana iPad sekhibhodi kune yako Mac